गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले १७ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले डा. केसीका जायज माग पूरा गरी अनसन ताेडाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेल उपस्थित थिए।
'६० वर्षको उमेरमा यति लामो समय अनशन बस्दा के भएको होला भन्ने मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनू भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,' समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले भने।
उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले केसीको वार्ता समितिसँग जारी छलफलबारे जानकारी दिए। वार्ता सहमतिको नजिक पुगेको र गगन थापा, केदारभक्त माथेमा र डा. भगवान कोइराला लगायतले दुवैतिर छलफल गरिरहेको बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखाेल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा कलेज खोल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा एेन बनाउन लागिएको पनि उनले उल्लेख गरे। माथेमा प्रतिवेदनअनुसार काम हुन लागेको भन्दै उनले केही व्यवस्था थपिन सक्ने संकेत गरे। विधेयक छलफलको क्रममै रहेकाले यसमा धेरै नबोल्ने उनले बताए।
शिक्षा सचिव शान्तराज श्रेष्ठले डा. केसीको माग सम्बाेधनका लागि चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम सुरू गरेको जानकारी दिए। डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अनसन तोड्न पनि अाग्रह गरे।
बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले केसीका माग पूरा गर्न सक्ने/नसक्नेहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २६, २०७४, ०१:२१:५९